စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ မန္တလေးမြို့က ဆန္ဒပြပွဲ မြင်ကွင်း။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၂၁)
မန္တလေးမြို့မှာ လုပ်တဲ့ စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေး လူထုဆန္ဒပြပွဲကို မြို့ခံလူထု သိန်းဂဏန်းနဲ့ချီ ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့ စုဝေးခဲ့ကြပြီးတော့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိခဲ့တယ်လို့ ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေဘက်က တချို့လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့တားဆီးတာတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ မန္တလေးလူထုဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကို ကိုရန်နိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ကိုရန်နိုင်။ ။ ကိုတေဇာဆန်းရေ။ မန္တလေးဘက်က ဆန္ဒပြပွဲအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဒေါက်တာတေဇာဆန်း။ ။ မန္တလေးကတော့ မနေ့ကစပြီးတော့ ဆန္ဒပြတာကတော့ တမြို့လုံးပါပဲ။ တမြို့လုံးကို လမ်းလျှောက်တယ်၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သွားတယ်။ ကားတွေနဲ့သွားတယ်။ တမြို့လုံး ဆန္ဒပြတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ တမြို့လုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင် သိန်းနဲ့ချီပြီး ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ လမ်းလျှောက်တဲ့အဖွဲ့တွေ အင်အား သောင်းနဲ့ချီပြီးရှိတယ်။ ဆိုင်ကယ်သမားတွေဆိုနည်းတာမဟုတ်ဘူး။ တမြို့လုံးကြီးကို ပြည့်နေပါပြီ။ မြို့သူမြို့သားအားလုံးက ဆန္ဒပြနေပါတယ်။ အစုံပဲ။ တောင်သူလယ်သမားတွေလည်း ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေက ဦးဆောင်တာလည်းပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်တာလည်းပါတယ်။ လက်ရှိကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင်တာလည်းပါတယ်။ ကျောင်းသားဟောင်းတွေရော၊ လက်ရှိကျောင်းသားတွေရော။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဦးဆောင်တာလည်းပါတယ်။ နောက် ပါတီဝင်တွေလည်းပဲ အများကြီး ပါပါတယ်။ အခုကတော့ လူထုလူတန်းစားပေါင်းစုံ- လှည်းနေ၊ လှေအောင်း၊ မြင်းဇောင်းမကျန် ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူ တဦးတယောက်ကဦးဆောင်တယ်ဆိုတာထက် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး၊ မြို့သူမြို့သားအားလုံးက ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုရန်နိုင်။ ။ …ဆိုတော့ အခုလို တမြို့လုံးထွက်ပြီး ဆန္ဒပြကြတာဆိုတော့ အဓိကတောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်း ပြောပြပါအုံးဗျ။
ဒေါက်တာတေဇာဆန်း။ ။ နံပါတ် (၁) ကတော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူအားလုံးက ဒီမိုကရေစီကိုပဲ လိုလားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမှ မလိုလားဘူး။ အခုလို အာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရပ်ကို လုံးဝ လုံးဝ လက်မခံဘူး။ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးက နံပါတ် (၁) ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၂) ကတော့ အာဏာရှင်စနစ်ကို အလိုမရှိဘူး။ အာဏာရှင်စနစ်ကို အလုံးစုံအလိုမရှိပါဘူး.
နံပါတ် (၃) ကတော့ အခု မတရား အဓမ္မဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရေး။ နောက်ဆုံးကတော့ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေသာလျှင် ကျနော်တို့ရဲ့တရားဝင်ရွေးကောက်ခံ၊ ကျနော်တို့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲခင်ဗျ။
ကိုရန်နိုင်။ ။ ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ အာဏာပိုင်တွေဘက်က တစုံတရာအရေးယူတာတွေ၊ ဖမ်းဆီးတာတွေရှိလား။
ဒေါက်တာတေဇာဆန်း။ ။ လုံခြုံရေးကတော့ တမြို့လုံးကို ရဲကားတွေ ချထားပါတယ်။ အခုအချိန်အထိ ပြည်သူနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့တာမျိုး၊ ကျနော်တို့ကိုတားဆီးတာမျိုးတော့ အခုအချိန်အထိ မလုပ်သေးဘူး။ လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း တမြို့လုံးဆန္ဒပြနေတာ။ မန္တလေးက ဆိုင်ကယ်မြို့ဆိုတော့ တမြို့လုံးဆန္ဒပြတာဆိုတော့ သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှ တားလို့ရမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ တမြို့လုံးကို လမ်းတိုင်း လမ်းတိုင်း၊ နေရာတိုင်းမှာ ကျနော်တို့က ဆန္ဒပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျုံးလေးခုလုံးကိုတော့ ဝင်လို့မရအောင် လမ်းတွေပိတ်ထားတယ်။
ကိုရန်နိုင်။ ။ ကျုံးကို ပတ်လို့မရဘူးလား။
ဒေါက်တာတေဇာဆန်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျုံးကိုပတ်လို့မရဘူး။ ကျုံးတွေကတော့ ပိတ်ထားတယ်။
ကိုရန်နိုင်။ ။ အဲဒါဆို တခြားနေရာတွေမှာတော့ ဆန္ဒပြတယ်။ ကျုံးကိုပတ်လို့မရဘူး။ အဲလိုလား။
ဒေါက်တာတေဇာဆန်း။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျုံးကိုပတ်လို့သွားလို့မရဘူး။ ကျန်တဲ့အဓိကလမ်းမကြီးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မန္တလေးမှာ ၈၄ လမ်းမကြီး။ ၇၈ လမ်းမကြီး၊ လမ်း ၈၀ လမ်းမကြီး၊ ၆၂ လမ်းမကြီး၊ လမ်းမကြီးတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်လေ။ လုံခြုံရေးကားတွေကတော့ အနှံ့အပြားမှာရှိတယ်။ ရဲတွေလည်းရှိတယ်။ သို့သော် လူထုအင်အားနဲ့စာရင် ရဲအင်အားက ဘာမှ…နည်းတယ်ပေါ့။ ကျနော်တို့က လူထုက သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ လမ်းမပေါ်ရောက်နေကြပါတယ်။
ကိုရန်နိုင်။ ။ ကျနော် ထင်လိုက်တာက ကျုံးကိုပတ်လို့ရတယ်ထင်တာ။ မနေ့က ကျုံးကို ပတ်လို့ရတယ်မို့လား။
ဒေါက်တာတေဇာဆန်း။ ။ ဟုတ်တယ်။ မနေ့ကအထိ ကျုံးကိုပတ်လို့ရသေးတယ်။ အခုဟာကတော့ ကျုံးရဲ့အဓိက ၇၃ လမ်း ကျုံးအ၀င်မှာ လုံခြုံရေးတွေ အတင်းအကြပ် ချထားပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုရန်နိုင်။ ။ ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဒေါက်တာတေဇာဆန်း။ ။ အား…။ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ မန္တလေးမှာ ပြည်သူလူထုအားလုံးက လမ်းပေါ်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့၊ နောက် လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ နောက် အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းက အိမ်ပေါက်တိုင်းမှာလည်း ကြွေးကျော်သံတွေ၊ လက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ သင်္ကေတတွေ၊ နောက် ကျနော်တို့ လမ်းလျှောက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုကို ရေဗူးကမ်းတာတွေ၊ စသဖြင့် ကြွေးကျော်သံနဲ့ လိုက်တိုင်တာတွေ တမြို့လုံးပါပဲခင်ဗျ။ ကျနော်တို့ လမ်းလျှောက်နေတာဆိုရင် ၂ ရက်ရှိပြီပေါ့။ နေရာစုံလည်း ရောက်ပြီးပြီ။ အဲဒီတော့ အပြည့်ပေါ့။ တမြို့လုံးကို ဆန္ဒပြတာပါ။ ပြည်သူလူထုအားလုံးက ဒီဆန္ဒပြပွဲကို ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရန်နိုင်။ ။ နောက်နေ့တွေမှာရော ဘာအစီအစဉ်တွေ ရှိပါလဲ။
ဒေါက်တာတေဇာဆန်း။ ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ကျနော်တို့တောင်းဆိုထားတဲ့ ကြွေးကျော်သံတွေ၊ ကျနော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေရရှိဖို့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော့်အနေနဲ့ အဓိကပြောချင်တာကကျနော်တို့အားလုံးသည် လုံးဝ အကြမ်းဖက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ မိမိတို့ရဲ့ မူလရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့ ဆန္ဒပြနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့အားလုံးသည် လုံးဝအကြမ်းဖက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ မိမိတို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အခုလို ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
မန္တလေးက ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မန်တလေးလူထုဆန်ဒပွပှဲခေါငျးဆောငျတဦးဖွဈသူနဲ့ VOA ဆကျသှယျမေးမွနျးမှု
မန်တလေးမွို့မှာ လုပျတဲ့ စဈတပျဆနျ့ကငျြရေး လူထုဆန်ဒပွပှဲကို မွို့ခံလူထု သိနျးဂဏနျးနဲ့ခြီ ဆကျပွီး ဆန်ဒပွခဲ့ကွပွီးတော့ စုဝေးခဲ့ကွပွီးတော့ ဆန်ဒပွပှဲတှကေတော့ ငွိမျးငွိမျးခမျြးခမျြးရှိခဲ့တယျလို့ ဆန်ဒပွခေါငျးဆောငျတဦးက ပွောပါတယျ။ အာဏာပိုငျတှဘေကျက တခြို့လမျးတှကေို ပိတျဆို့တားဆီးတာတှေ ရှိခဲ့တယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ မန်တလေးလူထုဆန်ဒပွပှဲဦးဆောငျသူတဦးဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာတဇောဆနျးကို ကိုရနျနိုငျက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
ကိုရနျနိုငျ။ ။ ကိုတဇောဆနျးရေ။ မန်တလေးဘကျက ဆန်ဒပွပှဲအခွအေနေ ဘယျလိုရှိလဲ။
ဒေါကျတာတဇောဆနျး။ ။ မန်တလေးကတော့ မနကေ့စပွီးတော့ ဆန်ဒပွတာကတော့ တမွို့လုံးပါပဲ။ တမွို့လုံးကို လမျးလြှောကျတယျ၊ ဆိုငျကယျတှနေဲ့သှားတယျ။ ကားတှနေဲ့သှားတယျ။ တမွို့လုံး ဆန်ဒပွတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ တမွို့လုံးပေါငျးမယျဆိုရငျ သိနျးနဲ့ခြီပွီး ဆန်ဒပွနကွေပါတယျ။ အခုအခြိနျအထိ လမျးလြှောကျတဲ့အဖှဲ့တှေ အငျအား သောငျးနဲ့ခြီပွီးရှိတယျ။ ဆိုငျကယျသမားတှဆေိုနညျးတာမဟုတျဘူး။ တမွို့လုံးကွီးကို ပွညျ့နပေါပွီ။ မွို့သူမွို့သားအားလုံးက ဆန်ဒပွနပေါတယျ။ အစုံပဲ။ တောငျသူလယျသမားတှလေညျး ပါတယျ။ အလုပျသမားတှကေ ဦးဆောငျတာလညျးပါတယျ။ ကြောငျးသားတှေ ဦးဆောငျတာလညျးပါတယျ။ လကျရှိကြောငျးသားတှေ ဦးဆောငျတာလညျးပါတယျ။ ကြောငျးသားဟောငျးတှရေော၊ လကျရှိကြောငျးသားတှရေော။ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးတှေ ဦးဆောငျတာလညျးပါတယျ။ နောကျ ပါတီဝငျတှလေညျးပဲ အမြားကွီး ပါပါတယျ။ အခုကတော့ လူထုလူတနျးစားပေါငျးစုံ- လှညျးနေ၊ လှအေောငျး၊ မွငျးဇောငျးမကနျြ ဆန်ဒပွကွတာဖွဈပါတယျ။ မညျသူ တဦးတယောကျကဦးဆောငျတယျဆိုတာထကျ နိုငျငံသူနိုငျငံသားအားလုံး၊ မွို့သူမွို့သားအားလုံးက ဆောငျရှကျနကွေခွငျးဖွဈပါတယျခငျဗြ။
ကိုရနျနိုငျ။ ။ …ဆိုတော့ အခုလို တမွို့လုံးထှကျပွီး ဆန်ဒပွကွတာဆိုတော့ အဓိကတောငျးဆိုခကျြတှကေိုလညျး ပွောပွပါအုံးဗြ။
ဒေါကျတာတဇောဆနျး။ ။ နံပါတျ (၁) ကတော့ ကနြျောတို့ ပွညျသူအားလုံးက ဒီမိုကရစေီကိုပဲ လိုလားပါတယျခငျဗြာ။ ဘယျအာဏာရှငျစနဈကိုမှ မလိုလားဘူး။ အခုလို အာဏာသိမျးတဲ့လုပျရပျကို လုံးဝ လုံးဝ လကျမခံဘူး။ ဒီမိုကရစေီရရှိရေးက နံပါတျ (၁) ဖွဈပါတယျ။
နံပါတျ (၂) ကတော့ အာဏာရှငျစနဈကို အလိုမရှိဘူး။ အာဏာရှငျစနဈကို အလုံးစုံအလိုမရှိပါဘူး.
နံပါတျ (၃) ကတော့ အခု မတရား အဓမ်မဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ ကနြျောတို့ခေါငျးဆောငျတှအေားလုံးကို ခွှငျးခကျြမရှိ အမွနျဆုံးပွနျလှတျပေးရေး။ နောကျဆုံးကတော့ ကနြျောတို့လိုခငျြတဲ့ ဒီမိုကရစေီရရှိရေးဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ ကနြျောတို့ ပွညျသူလူထုက ရှေးခယျြတငျမွှောကျထားတဲ့ ရှေးကောကျခံ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီလှတျတျော ကိုယျစားလှယျတှသောလြှငျ ကနြျောတို့ရဲ့တရားဝငျရှေးကောကျခံ၊ ကနြျောတို့ကို ကိုယျစားပွုတဲ့ကိုယျစားလှယျတှေ ဖွဈပါတယျဆိုတဲ့အကွောငျးပါပဲခငျဗြ။
ကိုရနျနိုငျ။ ။ ဒီနဆေ့န်ဒပွပှဲတှမှော အာဏာပိုငျတှဘေကျက တစုံတရာအရေးယူတာတှေ၊ ဖမျးဆီးတာတှရှေိလား။
ဒေါကျတာတဇောဆနျး။ ။ လုံခွုံရေးကတော့ တမွို့လုံးကို ရဲကားတှေ ခထြားပါတယျ။ အခုအခြိနျအထိ ပွညျသူနဲ့ထိပျတိုကျတှတေ့ာမြိုး၊ ကနြျောတို့ကိုတားဆီးတာမြိုးတော့ အခုအခြိနျအထိ မလုပျသေးဘူး။ လုပျမယျဆိုရငျလညျး တမွို့လုံးဆန်ဒပွနတော။ မန်တလေးက ဆိုငျကယျမွို့ဆိုတော့ တမွို့လုံးဆန်ဒပွတာဆိုတော့ သူတို့အနနေဲ့ဘယျလိုမှ တားလို့ရမှာတောငျမဟုတျဘူး။ တမွို့လုံးကို လမျးတိုငျး လမျးတိုငျး၊ နရောတိုငျးမှာ ကနြျောတို့က ဆန်ဒပွနခွေငျးဖွဈပါတယျ။ ကြုံးလေးခုလုံးကိုတော့ ဝငျလို့မရအောငျ လမျးတှပေိတျထားတယျ။
ကိုရနျနိုငျ။ ။ ကြုံးကို ပတျလို့မရဘူးလား။
ဒေါကျတာတဇောဆနျး။ ။ ဟုတျကဲ့၊ ကြုံးကိုပတျလို့မရဘူး။ ကြုံးတှကေတော့ ပိတျထားတယျ။
ကိုရနျနိုငျ။ ။ အဲဒါဆို တခွားနရောတှမှောတော့ ဆန်ဒပွတယျ။ ကြုံးကိုပတျလို့မရဘူး။ အဲလိုလား။
ဒေါကျတာတဇောဆနျး။ ။ ဟုတျပါတယျ။ ကြုံးကိုပတျလို့သှားလို့မရဘူး။ ကနျြတဲ့အဓိကလမျးမကွီးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ မန်တလေးမှာ ၈၄ လမျးမကွီး။ ၇၈ လမျးမကွီး၊ လမျး ၈၀ လမျးမကွီး၊ ၆၂ လမျးမကွီး၊ လမျးမကွီးတှေ အမြားကွီးရှိသေးတယျလေ။ လုံခွုံရေးကားတှကေတော့ အနှံ့အပွားမှာရှိတယျ။ ရဲတှလေညျးရှိတယျ။ သို့သျော လူထုအငျအားနဲ့စာရငျ ရဲအငျအားက ဘာမှ…နညျးတယျပေါ့။ ကနြျောတို့က လူထုက သိနျးနဲ့ခြီပွီးတော့ လမျးမပျေါရောကျနကွေပါတယျ။
ကိုရနျနိုငျ။ ။ ကနြျော ထငျလိုကျတာက ကြုံးကိုပတျလို့ရတယျထငျတာ။ မနကေ့ ကြုံးကို ပတျလို့ရတယျမို့လား။
ဒေါကျတာတဇောဆနျး။ ။ ဟုတျတယျ။ မနကေ့အထိ ကြုံးကိုပတျလို့ရသေးတယျ။ အခုဟာကတော့ ကြုံးရဲ့အဓိက ၇၃ လမျး ကြုံးအဝငျမှာ လုံခွုံရေးတှေ အတငျးအကွပျ ခထြားပါတယျခငျဗြ။
ကိုရနျနိုငျ။ ။ ပွညျသူတှရေဲ့ပူးပေါငျးပါဝငျမှုကရော ဘယျလိုရှိလဲ။
ဒေါကျတာတဇောဆနျး။ ။ အား…။ အငျမတနျကောငျးပါတယျခငျဗြ။ မန်တလေးမှာ ပွညျသူလူထုအားလုံးက လမျးပျေါဆိုငျကယျတှနေဲ့၊ နောကျ လမျးလြှောကျကွတယျ။ နောကျ အိမျတိုငျး အိမျတိုငျးက အိမျပေါကျတိုငျးမှာလညျး ကွှေးကြျောသံတှေ၊ လကျသုံးခြောငျးထောငျတဲ့အာဏာရှငျဆနျ့ကငျြတဲ့ သင်ျကတေတှေ၊ နောကျ ကနြျောတို့ လမျးလြှောကျလာတဲ့ပွညျသူလူထုကို ရဗေူးကမျးတာတှေ၊ စသဖွငျ့ ကွှေးကြျောသံနဲ့ လိုကျတိုငျတာတှေ တမွို့လုံးပါပဲခငျဗြ။ ကနြျောတို့ လမျးလြှောကျနတောဆိုရငျ ၂ ရကျရှိပွီပေါ့။ နရောစုံလညျး ရောကျပွီးပွီ။ အဲဒီတော့ အပွညျ့ပေါ့။ တမွို့လုံးကို ဆန်ဒပွတာပါ။ ပွညျသူလူထုအားလုံးက ဒီဆန်ဒပွပှဲကို ပူးပေါငျးပါဝငျနကွေခွငျးဖွဈပါတယျ။
ကိုရနျနိုငျ။ ။ နောကျနတှေ့မှောရော ဘာအစီအစဉျတှေ ရှိပါလဲ။
ဒေါကျတာတဇောဆနျး။ ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့ကတော့ ကနြျောတို့တောငျးဆိုထားတဲ့ ကွှေးကြျောသံတှေ၊ ကနြျောတို့ရဲ့တောငျးဆိုခကျြတှရေရှိဖို့ ဆကျလကျပွီးတော့ ဆောငျရှကျသှားမှာပါ။ ဒီနရောမှာ ကနြေျာ့အနနေဲ့ အဓိကပွောခငျြတာကကနြျောတို့အားလုံးသညျ လုံးဝ အကွမျးဖကျခွငျးမရှိပါဘူး။ ငွိမျးခမျြးစှာ မိမိတို့ရဲ့ မူလရပိုငျခှငျ့ဖွဈတဲ့ ငွိမျးခမျြးစှာစုဝေးခှငျ့နဲ့ ဆန်ဒပွနခွေငျးသာဖွဈပါတယျခငျဗြာ။ ကနြျောတို့အားလုံးသညျ လုံးဝအကွမျးဖကျတာလညျးမဟုတျဘူး။ ငွိမျးခမျြးစှာ မိမိတို့ရဲ့လိုအငျဆန်ဒတှကေို ဒီမိုကရစေီအရေးအတှကျ အခုလို ဆန်ဒပွ တောငျးဆိုနခွေငျးဖွဈပါတယျခငျဗြ။
မန်တလေးက ဒီနဆေ့န်ဒပွပှဲအခွအေနနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဒေါကျတာတဇောဆနျးကို ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။